Argentina noqotay sharciga cusub ee macdanta todobaadkan - Shiinaha JP Birta & Qalabka
maamulka Argentine, ciyaartoyda warshadaha iyo ururada ayaa la filayaa inuu saxiixo toddobaadkan heshiis dheer la sugayay federaalka macdanta oo midaynaya sharciga hadda jira guud ahaan dalka, taasoo qayb ka ah dadaal joogto ah in ay ku boodaan-bilaabi maalgashiga ganacsiga.
quruuntii oo, mar uu jecel yahay ka mid ah maal-macdanta, ayaa dhacay ka dambeeya dariska Chile iyo Peru inkastoo ay ku jiraan kayd hodan of copper, dahab, iyo lacag iyo zinc.
Ilaa iyo hadda, xeerarka degaanka ahaayeen oo keliya ma aha adag, laakiin sidoo kale kala duwan, iyadoo todoba ka mid ah 23 gobollada dalka ayaa isagoo ganaax buuxda oo ku saabsan isticmaalka cyanide ka badan in arrimaha deegaanka.
Tan iyo markii uu xafiiska dabayaaqadii 2015, Madaxweyne Mauricio Macri ayaa ku dhaqmaadka tallaabooyinka inaan soo nooleeyo warshadda macdan qodista ee dalka. Mid ka mid ah kuwa ugu horeeya waxaa baabi'inta canshuurta 5% ah shirkadaha macdanta iyo tamarta ee February ee sannadkii hore.
Waxa uu sidoo kale lagala mamnuuc ah oo ku saabsan shirkadaha macdanta shisheeye diraya faa'iidada sameeyey Argentina ka mid ah dalka.
Haddaba, in maamulkiisu uu soo mari waa sharciga macdanta dalka oo si maalgashiga double waaxda $ 25 bilyan oo sideed sano - in Dhawyahay inuu waddada loogu xaaro goolkii ugu hami Macri ee.
Under Madaxweynaha hore Cristina Fernandez, kaasoo kor u kacay kaalin gobolka , Argentina heshay keliya $ 10 bilyan oo loogu talagalay 2007-15 muddada. Inta lagu guda jiro sano ee la mid ah, maalgelinta macdanta Chile ee ahayd $ 80bn iyo 52bn Peru ee $.
Sharciga cusub, wargeyska La Opinion Austral ayaa sheegay (in Spain), waxaa u malaynayeen in ay bixiyaan canshuurta xasiloonida in maal, kaa caawin looga fogaado khilaafaadka la dawladaha hoose iyo badiyeen taageerada bulshooyinka maxaliga ah ee macdanta, ee fashion ka mid ah sida dawladdii hore sameeyey la batroolka. Laakiin falanqeeyayaal at BMI Research digo halista dhaw in la leexiyo karin qorshooyinka Mecri ee:
"Data dhaqaale Q117 taagta daran-badan-la filayaa soo jeedinaya taxne khatarta bixisaa to our Saadaasha koritaanka GDP dhabta ah ee 3.1% ee 20 17 iyo suurtagalnimada of lo'aad siyaasadda in wiiqi doonaan iman kara koritaanka," oo ay qoraan. "Haddii koritaanka organic ma xoojiyaan bilaha soo socda, isbahaysiga Macri ee lagu wiiqay laga yaabaa in doorashada bartamihii muddo-October, taasoo uu arki karin siyaasadaha dhaqaalaha inch xagga siyaasadaha dheeraad ah la tacaalida ee ka horreeyay uu (...) In la eego warshadda macdan qodista, wareeg kasta ka ganacsi Macri ee iska habaynta saaxiibtinimo looga hortagi lahaa maalgashiga iyo la hubin ilaa taasoo keentay in doorashooyinkii bartamihii dheer-tahay dib u dhigi doontaa qaar ka mid ah go'aamada maalgelinta final. "
khubaro BMI ayaa sheegaya halista kale ka xeel dheer sii kordhaya ee isticmaalka biyaha macdan qodayaasha ', taas oo ay u badan tahay in ay kordhin xiisado u dhaxeeya shirkadaha iyo bulshooyinka maxalliga ah iyo xeerarka taasoo keentay in dheeraad ah iman doonaan.
"Iyada oo aan ka filan diiradda on taageeraya koritaanka warshadaha macdanta heerka federaalka si loogu daboolo arrimaha gobolka, mucaaradka maxalliga ah iyo cadaadis siyaasadeed oo ay dhaawici doontaa Argentina ee soo jiidashada sida caga maalgashiga macdanta ah," BMI soo gebogebeeyay.